Indawo yokujonga iLake enendawo enkulu yelanga
Igumbi elimangalisayo, elikhanyayo kunye nelanamhlanje elinombono wechibi.
Uhlala ngokuthe ngqo kumda wehlathi eli-100m ngaphezu kweMattsee ngombono omangalisayo. Ifulethi elikhethekileyo eline-67 sqm lichukumisa ngokubekwa kwegumbi elibanzi kunye neefestile ezinkulu, ezivumela iimbono ezikhethekileyo zeendawo ezikuyo kuzo zonke iindawo.
Indawo yokuhlala epholileyo ibandakanya ibhloko yekhitshi, indawo yokutyela kunye neendawo ezimbini zokuhlala ezahlukeneyo (enye enebhedi yesofa). Kukwakho negumbi lokuhlambela eliphangaleleyo kunye negumbi lokulala.
Ithafa elikhulu elinombono phezu kwamachibi eDreiseenland likumema ukuba uphumle kwaye wonwabe.
Indawo ezolile kakhulu kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqalisa imisebenzi emininzi yangaphandle efana nokuhamba ngebhayisekile, ukubaleka, ukukhwela intaba, iintsuku zokuphumla echibini, ukuhamba ngesikhephe, ukubheqa, ukusefa umoya nokunye okuninzi. Ngesicelo ungaboleka iStandUpPaddle yethu okanye ibhayisekile.
Ubumelwane buzolile kakhulu.
UChristine (umamkeli oyintloko) uhlala kwipropati enye kwaye ufikeleleka ngokulula nangaliphi na ixesha.
Inombolo yomthetho: 503230001042020